कपाल पातलो छ ? यी ३ घरेलु कपाल मास्क लगाएर बनाउनुहाेस् बाक्लो | Safal Khabar
सोमबार, १५ कार्तिक २०७८, १३ : ३४
एजेन्सी । यदि तपाइँ प्राकृतिक रूपमा कपाल बाक्लो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ उल्लेख गरिएको विधि अनुसार कुनै एक हेयर मास्क तयार गर्नुहोस्। यो मास्क हप्तामा एक वा दुई पटक लगाउनु पर्छ। यहाँ यी हेयर मास्कहरू बनाउने र लगाउने विशेष विधिहरू छन्। आज हामी तपाईका लागि यी ल्याएका छौं। त्यसोभए यदि तपाई पातलो कपालको समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ भने यी मध्ये कुनै एक हेयर मास्क अवश्य प्रयास गर्नुहोस्। कपाल बाक्लो कसरी बनाउने ?
नरिवलको दूध र मेथीको दाना
तपाइँ आफ्नो पातलो कपाललाई बाक्लो बनाउन हप्तामा एक वा दुई पटक आफ्नो कपालमा नरिवलको दूध र मेथी हेयर मास्क लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ हप्तामा दुई पटक यो हेयर मास्क लगाउनुहुन्छ भने मात्र दुई हप्ताभित्र तपाइँ तपाइँको कपालमा सुधार देख्न सुरु हुनेछ।
यो हेयर मास्क बनाउन मेथीको दानालाई आफ्नो कपालको लम्बाइ अनुसार पानीमा भिजाउनुहोस्। पुरुषको कपालका लागि दुईदेखि तीन चम्चा मेथीको दाना पर्याप्त हुन्छ । यो मेथीको दानालाई बिहान ३ देखि ४ चम्चा नरिवलको दूधमा पिसेर खानुहोस् । यदि त्यहाँ नरिवलको दूध छैन भने, तपाइँ यसलाई दूधको बल थपेर पनि पीस गर्न सक्नुहुन्छ।
तयार पेस्टलाई कपालको जरादेखि छेउसम्म हेयर मास्कको रूपमा लगाउनुहोस् र त्यसपछि ३० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। त्यसपछि माइल्ड स्याम्पुले कपाल धुनुहोस्।
अण्डा कपाल मास्क
अण्डाको हेयर मास्क लगाउनाले तपाईको कपाल बाक्लो र बाक्लो हुन्छ । तपाईंले हप्तामा एक वा दुई पटक आफ्नो कपालमा अण्डाको हेयर मास्क आधा घण्टासम्म लगाउनुपर्छ। यो मास्क बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो कपालको लम्बाइ अनुसार अण्डा लिनुहोस् र त्यसपछि यसको सेतो र पहेँलो भागलाई राम्रोसँग फिट्नुहोस्। अब यस तरलमा दुई चम्चा नरिवलको तेल वा तोरीको तेल हाल्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई कपालको जरादेखि छेउसम्म लगाउनुहोस्।
एभोकाडो कपाल मास्क
एभोकाडो हेयर मास्क बनाउनको लागि एभोकाडो लिनुहोस्, यसलाई सानो टुक्रामा काट्नुहोस् र मिक्सर जारमा राख्नुहोस्। अब यसमा २ चम्चा मह, १ चम्चा नरिवलको तेल र आधा चम्चा कफी पाउडर मिलाउनुहोस्। यसलाई पीस्नुहोस्। तयार पेस्टलाई आधा घण्टासम्म कपालमा छाड्नुहोस् र त्यसपछि हर्बल स्याम्पुले ताजा पानीले कपाल धुनुहोस्।